Khilaaf lacageed oo ka dhex taagan wasaarada gaashaan dhiga gumaysiga Itoobiya.
Midowga Yurub oo gargaar ugu deqay dalal ku yaalla bariga Afrika
Xukuumadda Itoobiya oo dhalan rogaysa magaalada Bademe
Dowlada maraykanka oo ka digtay weeraro argagixiso.
Deeq raashin oo loo qaybiyay dad Itoobiyaan ah oo ku tabaalaysnaa Boosaaso
Barnaamujkii aragtida halgamaaga oo aan ku soo qaadan doono qoraal taariikh ah oo uu diyaariyay aqoonyana Soomaaliyeed oo la dhaho Dr. Enow iyo suugaan halgameed
Khilaaf lacageed oo ka dhex taagan wasaarada gaashaan dhiga gumaysiga Itoobiya
Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dawlada gumaysiga Itoobiya Semora Yuunis iyo askartii ka soo laabatay wadamada Burundi iyo Sierra Leone ee ay xukuumada gumaysiga Itoobiya ku biirisay ciidamada nabad ilaalinta ee Jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ay labadaas dal u dirtay.
Ciidamada nabad ilaalinta ee la geeyay labadaas dal ayaa waxay ilaalinayeen amaanka iyo kaladnbaynta dadka ku dhaqan labadaas dal, kadib makii uu dagaal sokeeye oo lagu hoobtay ka dhax oogmay shucuubta labadaas dal, nadaamkii iyo kala danbeeyntiina ay faraha ka baxeen.
Cidamada wadamadaas la geeyay ayaa waxaa maamulayay Jamciyada quruumaha ka dhaxaysa waxaana askarigiiba la siinayay $9000 oo doolar oo mushahaar ah. lacagtaas oo loo soo marinayay xukuumadaha ay ciidamadaasi ka kala yimaadeen ayaan waxba laga soo gaadhsiin ciidamada ka socday taliska ay xaruntiisu tahay Adis Ababa ee Itoobiya.
Ciidanaka Itoobiya ee ka soo laabtay labadaas dal ayaa rabshado iyo amar diido ku kacay iyaga oo ka cadhaysan lacagtaas laga musuq maasuqay ee ay xaqa u lahaayeen. Taliyaha ciidamada taliska Itoobiya ayaa askartaas si cad ugu diiday in la siiyo lacagaha dawladooda loogu soo dhiibay, taasina waxay keentay khilaaf balaadhan oo soo kala dhex galay saraakiishii wasaarada gaashaandhiga, kaas oo gaadhay kaligii taliye Melis Zenawi.
Inkasta oo uu kaligii taliye Melis Zenaawi ciidamadii cadhaysnaa ka balan qaaday in uu siin doono qaar ka mid ah lacagihii ay codsanayeen, hadana waxaa muuqata in ayna marna ku qanacsaneeyn habka laysu daba mariyay lacagahooda, walina waxaa taagan rabshadihii ay askartaasi ku muujinayeen cabashooyinkooda iyo kala qaybsanaantii saraakiisha wasaarada gaashaan dhiga xukuumada kaligii taliye Malez Zanawi.
Midowga Yurub ayaa uggu yaboohay gargaar cunto iyo kaalmooyin kale afar waddan oo ku yaalla Bariga Afrika, waxaana gargaarkaas loogu talagalay sidii loola tacaali lahaa abaaraha ba�an ee dalalkaas ka jira iyo waliba cudurro laga baqayo inay ka dhashaan xaalada qallafsan ee ka taagan goobaha ay abaaruhu saameeyeen.
Midowga Yurub wuxuu jimcihii sheegay inuu dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritereya iyo Kenya u qoondeeyay lacag gaadhaysa 12,5 mailyan oo Euro, taasoo u dhiganta 16,000,000 milyan oo doollarka Maraykanka ah.
War saxaafadeed ka soo baxay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in 6,5 milyan oo Euro loo adeegsan doono hawlaha la xidhiidha biyo siinta degdega ah iyo gargaar cunto oo la gaadhsiinayo dadka ku nool goobaha ay abaaruhu wax-yeelleeyeen.
Khamiistii la soo dhaafnay waxay Qaramada Midoobay sheegtay in gobolka Ogadenya uu qarka u saaran yahay xaalad bani�aadanimo oo aad u xun, taasoo ay keeneen abaaro iska soo daba noqday oo horseeday in ceelashii biyuhu ay gudhaan, dhulkii daaqsinta aahana uu nabaad guuro.
Xukuumadda Itoobiya dhalan rogaysa magaalada Bademe
Afhayeenka ciidamada Qaramada Midoobey ee kala dhex fadhiya Itoobiya iyo Eritereya UNMEE Gail Bindley ayaa sugtay in xukuumadda Itoobiya ay dhismayaal badan ka wado nawaaxiga magaalada Bademe oo dalka Eritereya loo xukumay, waxayna arrintaasi xadgudub cad ku tahay qaraarkii Golaha Ammaanka ka soo baxay 14 Maarso 2003, kaasoo mamnuucayay in degaanno laga sameeyo xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritereya.
Gail Bindley waxay arrintan ku sheegtay warbixin kooban oo ay soo saartay 21 bishii Oktober, waxayna tilmaantay in Golaha Ammaanku uu ka dooday deegaamaynta sharci darrada ah ee xukuumadda Itoobiya ka wado nawaaxiga Bademe, isla markaana qoraal arrintaas ku saabsan loo gudbiyay.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa lagu tilmaamay inay ku talajirto sidii dagaal cusub uga billaaban lahaa xadka ay la wadaagto dalka Eritereya, sababtuna waxay tahay iyadoo ku hungowday rajadii ay ka qabtay in maxkamadda adduunku ay u xukunto dhulkii ay xoogga ku boobtay.
Sida aan kasoo xiganay bogga internetka ee Qorahay Online :ganacsatada reer Puntland oo iskood isu xilqaamay ayaa gurmad iyo kaalmo ufidiyey dad shacab ah oo kasoo cararay dhibaatadda Ciidamada Itoobiya ay ku hayaan dadka shibilka ah ee aan waxba galabsan,dadkaas ayaa in muddo ahba kusoo qulqulayay gobolada somaliya gaar ahaana gobolada Puntland,
Dadkaan ay Ganacsatadu Deeqda Raashinka ah u qaybiyeen ayaa Tiro ahaan gaadhaya 200 qof waxaana Ganacsatadu ay u xilsaareen in ay u Qaybiso Dadkaan Hay'adda Wadaniga ah ee la yidhaahdo Hay'adda isku xidhka Nabada iyo Xuquuqda aadanaha ee Puntland marka magaceeda lasoo gaabiyana la yidhaahdo (INXA).
Xidhiidhiyaha Hay�adda INXA Cabdi Faarax Axmed oo ay Idaacadda SBC ka waraysatay arrimahan dadkaan qoxootiga ah iyo raashinkan maanta loo qaybiyey ayaa waxaa uu sheegay in deeqdan raashiinka ah ay ku deeqeen qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso iyo hay�adaha NGO-yada wadaniga ah.
Si kastaba ha ahaatee, Dadkan Itoobiyaanka ah ee Maanta Deeqdan raashinka ah loo qaybiyey ayaa ahaa dad in mudo ahba ku Tabaalaysnaa Deegaanka Gobolka Bari ee Magaaladda Bosaaso halkaas oo ay Doonayeen in ay badankoodu uga sii gudbaan dhanka Dalka Sacuudiga.
Maraykanka oo ka digay weeraro argagixiso.
Dowladda Maraykanka ayaa digniin u soo jeedisay muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan goballada Nordic iyo Baltiga oo ka tirsan qaaradda Yurub.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa waxaa ay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ay taxadar dheeraad ah sameeyaan muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan dalalka ku yaalla goballadaasi, islamarkaana ay ka yaraadaan meelaha ay dadku ku badan yihiin iyo kaalimaha laga raaco basaska.
Wasaaradu waxay sheegtay in laga yaabo in dalalka ku yaalla labadaasi gobal ee Nordic iyo Baltiga suuragal tahay in ay weeraro argagixiso ka gaystaan argagixisada caalamiga ah.
Hasa-ahaatee wasaaraddu wax faah faahin oo dheeraad ah kama aysan bixin in digniintan cusub ay la xiriirto doorashada dalka Maraykanka oo billaabatay manta oo Talaado ahayd kuna began 02-11-04.
Gobalka Nordic ayaa ka kooban dalalka Sweden, Finland, Denmark, Norway iyo Iceland, halka dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania ay ka tirsan yihiin gobalka Baltiga.